(1) Working environment The stone engraving machine isahigh-tech mechatronics equipment, which has certain requirements for the working environment.(whatsapp:008615966055683) 1. Avoid equipment that seriously affects the signal transmission of the engraving machine, such as strong electricity ...ဆက်ဖတ်ရန် »
Stone CNC Router Machine blades to user guide : 1. For the acrylic cutting of stone engraving machine, single-edged spiral milling cutter is recommended. It is characterized by smokeless and odorless processing, fast speed, high efficiency, non-sticky, truly environmentally friendly, and its spe...ဆက်ဖတ်ရန် »
post အချိန်: မတ်လ -03-2020
၂၀၂၀၊ ဇန်နဝါရီလမှစ၍ တရုတ်နိုင်ငံ Wuhan တွင်“ Novel Coronavirus ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအဆုတ်ရောင်” ဟုခေါ်သောကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဤကပ်ရောဂါသည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိလူများ၏နှလုံးကိုထိမိခဲ့သည်၊ ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားနေစဉ်၊ တိုင်းပြည်အပေါ်နှင့်အောက်သို့တရုတ်လူမျိုးများသည်တက်ကြွစွာတိုက်ပွဲဝင်နေကြသည်။ဆက်ဖတ်ရန် »
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၇ ရက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသို့အိန္ဒိယဖောက်သည်များလာရောက်ကြသည်
post အချိန်: ဇူလိုင် -30-2019
ဇူလိုင်လ ၂၇ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၂၇ ရက်သည် Jinan China တွင်ပူပြင်းသည့်နေ့ဖြစ်သည်။ အိန္ဒိယဖောက်သည်များသည်ငါတို့စက်ရုံသို့လာရောက်လည်ပတ်ကြသည်။ ငါတို့၏မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအားလုံးကိုကြိုဆိုသည်။ အိန္ဒိယသူငယ်ချင်းများက CNC router စက်ထုတ်လုပ်မှုဌာနကို ၃ နာရီခန့်လာရောက်လည်ပတ်ပြီးတဲ့နောက်သူတို့လာတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ CO2 လေဆာထွင်းထုစက်ထုတ်လုပ်ရေးဌာနသို့လာရောက်ခဲ့ကြသည်။ဆက်ဖတ်ရန် »
CNC router machine ဆိုတာဘာလဲ။
post အချိန်: မေလ -28-2019
CNC ROUTER ကွန်ပျူတာ numerical control (CNC) router သည်သစ်သား၊ ဖွဲ့စည်းမှု၊ လူမီနီယမ်၊ သံမဏိ၊ ပလတ်စတစ်၊ ဖန်နှင့်အမြှုပ်များကဲ့သို့သောအမျိုးမျိုးသောခဲယဉ်းသောပစ္စည်းများကိုဖြတ်တောက်ရာတွင်အသုံးပြုသည့်လက်ကိုင် router နှင့်ဆက်စပ်သည့်ကွန်ပျူတာဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားသောထွင်းထုစက်ဖြစ်သည်။  CNC router များသည်များစွာသောအလုပ်များကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ဆက်ဖတ်ရန် »
post အချိန်: မေလ -21-2019
Shandong DADI CNC Equipment Co. , Ltd. ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ CNC ROUTER နှင့် CNC LASER စက်၏ကျွမ်းကျင်သောထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ထုတ်ကုန်များကိုကြော်ငြာလုပ်ငန်း၊ သစ်သားလုပ်ငန်း၊ ကျောက်မျက်လုပ်ငန်း၊ ပရိဘောဂလုပ်ငန်း၊ နှင့်အခြား ind ...ဆက်ဖတ်ရန် »
Post ကိုအချိန်: သြဂုတ်-03-2018
လေဆာရောင်ခြည်ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသုံးပြုမှုသတ္တုအပြောင်းအလဲနဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းမှအဆင်ပြေဆောင်ခဲ့တော်မူပြီ။ သင်ဆဲလေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်တွေအများကြီးအားဖြင့် dazzled နေတယ်ဆိုရင်, သင်တို့သည်ဤအချက်များကိုအာရုံစိုက်နိုင်ပါတယ်။ လေဆာရောင်ခြည်ဖြတ်တောက်ခြင်း၏ 1. ဖြတ်တောက်ခြင်းအရည်အသွေးကို: အချို့မီးဖိုချောင်သုံးကဲ့သို့ကားများ, စက်ပစ္စည်း, ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်အခြား ...ဆက်ဖတ်ရန် »
အဆိုပါလေဆာထွင်းထုခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်၌သာတစ်ဦးချွန်ထက်သော "ဓား" မဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာ၌နေရာတိုင်းမြင်သောပင်အဆင်တန်ဆာများနှင့်လက်မှုပညာလေဆာထွင်းထုထဲကနေကွဲကွာရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ကျနော်တို့တည်ဆောက်နိုင်မိသားစုအဝတ်ဘယ်လိုကိုကြည့်ကြရအောင်။ လေဆာရောင်ခြည်များအသုံးပြုမှု ...ဆက်ဖတ်ရန် »
ဤအချိန်တွင်အခါမိုးကြိုးပစ်တိုးက, အ Meng Xia ကာလအချိန်ဖြစ်ပါသည်, မကြာခဏမိုးရွာရွာနှင့်စိုစွတ်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင်အလွယ်တကူအရှင်လေဆာရောင်ခြည်၏စွမ်းဆောင်ရည်လျှော့ချခြင်းနှင့်ပျက်စီးစေခြင်းငှါ, လေဆာအတွက်ငွေ့ရည်ဖွဲ့ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ လေဆာရောင်ခြည်ငွေ့ရည်ဖွဲ့၏ဖြစ်ရပ်ဆန်းဖြေရှင်းဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? အဘယျသို့ s ကို ...ဆက်ဖတ်ရန် »
လိပ္စာ: တရုတ်နိုင်ငံ၊ ရှန်ဒေါင်းပြည်နယ်၊ ဂျင်နန်မြို့၊ မြောက်ဘက်ရွန်းရှန်းတိုင်းမ်စ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဆောက်အ ဦး ၆၊